BRT သတင်းများ၊ BRT မတော်တဆမှုများ၊ BRT မြေပုံများ၊ BRT လမ်းကြောင်းများ၊ လက်ရှိ BRT အစီအစဉ်များနှင့်လေလံပွဲများ
အက်စတန်ဘူတိုမက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ် (IMM) ၏တွဲဖက်ကုမ္ပဏီBELBİM A.Ş. ကတီထွင်ခဲ့သောလျှောက်လွှာအသစ်နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်မြို့သားများသည်၎င်းတို့၏စမတ်ဖုန်းများပေါ်ရှိအချက်အလက် matrix စနစ်မှတစ်ဆင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကိုသွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများမှ QR ကုဒ်နံပါတ်နှင့်ယခုဒေါင်းလုပ်လုပ်ယူပါ၊ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးနောက်ကျသည့်ဆောင်ပုဒ် [ပို ... ]
တိုင်ကြားမှုအစီရင်ခံစာများတွင်ပြုလုပ်သောအလုပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ တိုင်တန်းမှုအများဆုံးရရှိသော IETT ၏လိုင်းများတွင်တိုးတက်မှုရှိသည်။ ပုံမှန်အလုပ်များပြုလုပ်မှုကြောင့်တိုင်ကြားမှု ၈.၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးယေဘုယျတိုင်ကြားချက် ၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
IETT သည်၎င်း၏အင်ဂျင်နီယာကုန်သည်ကြီးများအသင်းနှင့်၎င်း၏ဘတ်စ်ကားများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် IETT စာရင်းစစ်များနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကန်ထရိုက်တာကုမ္ပဏီများ မှလွဲ၍ ဤမေးခွန်းများ၏အဖြေကိုလွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပေးသည်။ [ပို ... ]
IETT တိုးမြှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခကြေးငွေများကိုမနက်ဖြန်တွင်အကောင်အထည်ဖော်မည်။ ! ဒီမှာ Tariff အသစ်ပဲ။ IETT သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်သည်အစ္စတန်ဘူလ်တွင် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသားများသည် metrobus စျေးနှုန်းများဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြပြီးကျောင်းသို့သွားသောအခါမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ [ပို ... ]
BBB သမ္မတ Ekrem amomamoğluက CNR ၇ ကြိမ်မြောက်နိုင်ငံတကာစာအုပ်ပြပွဲကိုဖွင့်လှစ်သည်။ သူ၏နိဒါန်းမိန့်ခွန်းတွင်သူက“ ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်နိုင်မယ့်အရာတွေရှိတယ်။ စာအုပ်သို့မဟုတ်တိုင်းပြည်အတွက်အထူးစိတ်ဝင်စားမှု [ပို ... ]
နယူး Metrobus ဝယ်ယူပြီးနောက်လျှပ်စစ်သို့မဟုတ် Hybrid ဘတ်စ်ကား
Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ် (IMM) သည် Istanbul လူမျိုးများ၏ဘဝ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းမျဉ်း၏အရှည်နှင့်သိပ်သည်းဆများကြောင့်ပြက်လုံးများနှင့်ပါရဂူဘွဲ့များဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆနှင့်အတူဘူတာရုံ၏သက်တမ်းတိုး၏စီမံကိန်းကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့သည့် IMM, [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Istanbul Metropolitan Municipality မှလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးİbrahim Orhan Demir က metrobus လိုင်းပေါ်ရှိမတော်တဆမှုများကိုထပ်မံလျှော့ချရန်အတွက်ယာဉ်မောင်းများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သံ။ “ ၂၄/၇ [ပို ... ]
TEM၊ Imamoglu ၏ကတိအသစ်အတွက် Metrobus စီမံကိန်းများ
နေ့စဉ်တိုက်ကြီးနှစ်ခုအကြားခရီးသည် ၁ သန်းခန့်သယ်ဆောင်ပေးသော metrobus လိုင်းတွင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောဘတ်စ်ကားများဖြင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုအသစ်ပြုပြင်မည်။ Marmaray သည်ဘူတာရုံတိုးချဲ့ခြင်းအရှိန်မြှင့်သောလိုင်း၏သိပ်သည်းဆကိုရရှိရန်ပိုမိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်သည်။ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ရှိလက်မှုပညာနှင့်ကုန်သည်များအသင်းက ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုးမြှင့်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်အင်အားသုံးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ Istanbul မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏ဘေးအန္တရာယ်ညှိနှိုင်းရေးစင်တာတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု [ပို ... ]
အစ်စတန်ဘူလ်တွင်အငြိမ်းချမ်းဆုံးနေရာ၊ အမြင့်ဆုံးအပူဆုံးနေရာ Metrobus
စိတ်ကျန်းမာရေးအသင်းသည် 'CheckFeel' လျှောက်လွှာတွင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တည်နေရာအခြေပြုစိတ်လှုပ်ရှားမှုဝေမျှခြင်းကိုလေ့လာခဲ့ပြီး Istanbul ရှိနေရာများ၏ခံစားမှုမြေပုံကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူ ၁၀,၀၀၀ နီးပါးအထိရောက်ရှိလာသည့်အတွက်နေရာ ၁၅၀,၀၀၀ နီးပါးတွင်စိတ်ခံစားမှုများကိုမျှဝေခဲ့သည်။ အသင်း [ပို ... ]
Istanbul Metro မြေပုံ Metro လမ်းကြောင်းနှင့်မှတ်တိုင်များ
Istanbul Metro မြေပုံကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို Istanbul Metro Route နှင့် Istanbul Metro Stations နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းထားပါသည်။ Metro Istanbul မှလည်ပတ်သောIstရာမ Istanbul သည် M1, M2, M3, M4, M5, M6 နှင့် M7 Metro တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ [ပို ... ]